Barcelona Oo Xasuuqday Deportivo Alaves, Iyo Atletico Madrid Oo Ka Badisay Granada Horyaalka Spain
HomeFalanqeynta KulamadaBarcelona oo xasuuqday Deportivo Alaves, iyo Atletico Madrid oo ka badisay Granada Horyaalka Spain
Kooxda Barcelona ayaa guul muhiim ah ka gaartay kooxda Deportivo Alaves kulan ka tirsan Horyaalka Spain ee la liga wareegiisa 22-aad.
Goolasha Barcelona ee kulankan waxaa ka caawiyay Trincao iyo Lionel Messi oo dhaliyay min labo gool Daqiiqadihii 17-aad iyo 45+1 aad ee qeybta hore iyadoo lagu kala nastay labadaasi gool.
Qeybta danbe Barcelona ayaa goolasheeda sii wadatay waxana markale shabaqa soo taabtay Xidigaha Trincao iyo Lionel Messi Daqiiqadihii 74-aad iyo 75-aad ee Ciyaarta halka Goolka Shanaad uu dhaliyay Junior Firpo Daqiiqadii 80-aad ee ciyaarta guud ahaan ciyaarta ayaana ku soo dhamaatay 5-0.
Natiijada ayaa ka dhigan in Barcelona ay gasho booska labaad ee kala sareynta Horyaalka iyadoo 46 dhibcood la wadaagta kooxda Real Madrid oo si ku meel gaar ah u dhisa booska 3-aad ee horyaalka.
Barcelona ayaa kulankeeda xiga garoonkeeda ku soo dhaweeneysa kooxda Reer France ee PSG kulankaasi oo qeyb ka ah Championleague.
Kooxda Atletico Madrid ayaa sii dheereesatay Hogaanka Horyaalka La Liga kadib markii ay garaacday Kooxda Granada oo lagu ciyaaray Garoonkeeda ciyaartaasi oo ku soo dhamaatay.
inkastoo Caawa uusan Gool dhalin xidiga Weyn ee Luis Suarez hadana waxaa qeybta danbe Goolashada ka caawiyay Atletico Madrid xidigaha Marcos Llorente iyo Angel Correa Daqiiqadii 63-aad iyo 74-aad ee ciyaarta halka goolka Granada uu u dhaliyay Yangel Herrera,
Guusha Atletico madrid ayaa ka dhigan in hogaanka horyaalka ay ku qabato 8 dhibcood oo nadiif ah iyagoo leh 54 dhibcood.
Kooxda Atletico Madrid ayaa kulankeeda xiga booqandoonta kooxda Levante kulankaasi oo qeyb ka ah Horyaalka Spain ee La Liga.